Saraakiisha ciidanka Danab oo walaac ka muujiyey isku day siyaasadeed laga yaabo inay sameeyaan madaxda DF - Caasimada Online
Home Warar Saraakiisha ciidanka Danab oo walaac ka muujiyey isku day siyaasadeed laga yaabo...
Saraakiisha ciidanka Danab oo walaac ka muujiyey isku day siyaasadeed laga yaabo inay sameeyaan madaxda DF
Muqdisho (Casimada Online) – Ayada oo ciidamada Mareykanka ee tababaray ay Soomaaliya ka baxayaan, ayaa sarkiisha Danab ee hadda iyo kuwa hore, waxay cabsi ka muujinayaan in madaxda dowladda Soomaaliya ay u adeegsadaan faro-gelin siyaasadeed.
“Markii hore, haddii dowladda ay isku daydo inay faro-geliso Danab, oo ay u adeegsato siyaasad macno darro ah, Mareykanka ayaa ahaa kuwa dhihi jira ‘Maya ,joojiya,’” waxaa sidaas Washington Post u sheegay Axmed Cabdullaahi Sheekh, oo ahaa taliyihii Danab ee 2016 illaa 2019.
“Taasi waxay aheyd shuruudda Mareykanka ay ku xireen inay billaabaan tababarkeena, oo aheyd inaan noqon doonin kuwa siyaasadeed. Taas la’aanteed, xitaa ma awoodeen inaan difaacno dowladdeena,” ayuu yiri.
Axmed iyo saraakiisha kale ayaa sheegay in, inkasta oo hadda aysan socon faro-gelin baaxad weyn oo siyaasadeed oo lagu sameynayo ciidankan ka kooban 1,150 askari, haddana ay muuqdaan xaalad taas keeni kara,
Sarkaal ka tirsan Danab, oo fadhiggiisu yahay magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay sumcadda ciidanka, tan iyo markii uu soo baxay warka ah in ciidamada Mareykanka ay baxayaan.
“Cabsideena ugu weyn ayaa ah inaan lumino sumcadeenaa. Aaminaadda ay shacabka nagu qabaan ee ah inaan dalka u dagaalameyno ee aan u dagaalameyn siyaasi, taas oo ah awooddeena ugu weyn. Haddii aan taas lumino, waxba ma dhaanto musiibo,” ayuu yiri sarkaalkan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, si aysan u beegsan madaxda dowladda federaalka.
Wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji kama jawaabin codsi la xiriira inuu ka hadlo walaacan.
Taliye Christina Gibson oo ah afahyeenka AFRICOM ayaa sheegtay “in Mareykanka uusan jari doonin xiriirkooda Danab, islamarkaana ay u diyaariyeen qorsheyaal tababar oo kale.”
Cabsida saraakiisha Danab ayaa imaneysa ayada oo xiisadda siyaasadeed ee dalka ay sii kordheyso, islamarkaana ay soo muuqanayaan loolan iyo beegsi qabyaaladeed.
Ayada oo doorashada dalka ay soo dhowdahay, ayaa madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeeyey inuu beddelay saraakiil sare, oo xitaa uu ku jiro ra’iisul wasaarihiisa, si uu sare ugu qaado qorshihiisa dib u doorashada.
Sarkaal kale oo ka tirsan Danab, oo isna codsaday inaan la magacaabin, ayaa sheeegay inuu ka cabsi qabo in hoggaanka ciidankan sidoo kale la beddeli karo.
Tan iyo markii xilka laga qaaday Axmed Cabdullaahi Sheekh 2019, waxaa xilka uga dambeeyey saddex taliye oo kale, waxaana uu sheegay in sababta ay tahay dano siyaasadeed.
Madaxweyne Farmaajo kuma cusba inuu ciidanka u adeegsado danihiisa siyaasadeed iyo kuwa qabiil. Wuxuu sidan oo kale u adeegsaday ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo Turkiga uu tababaro, kuwaasi oo loo isticmaalay maamullada Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Ayada oo Mareykanka ka hortaagnii in sidoo kale uu kuwa Danab u adeegsado ay meesha ka baxayaan, gar ayey u leeyihiin in saraakiisha ay walaac qabaan.